ရှုးဖိနပ်မှအနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း ကင်းဝေးစေရန် – YANGON STYLE
လူအများစုမှာ အလုံပိတ်ထားသည့် ရှုးဖိနပ်များ၊ ဘွတ်ဖိနပ်များစီးရာတွင် ခြေထောက်အနံ့ထွက်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုဖိနပ်မျိုးကို စီးသူများအနေဖြင့် ခြေအိတ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ သင့်ခြေဖဝါးမှထွက်သည့်ချွေးများ (ခြေဆီ) ကို ခြေအိတ်မှစုပ်ယူထားသောကြောင့် အပြင်ဘက်ကိုအနံ့ထွက်မှုသက်သာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ခြေအိတ်ကို တစ်ရက်တစ်ခါလဲလှယ်ပေးခြင်းက အနံ့အသက်သာမက လျှော်ရတာလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ရှုးဖိနပ်၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေမှာ အနံ့ဆိုးမထွက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ? သင့်ခြေထောက်မှ ခြေဆီထွက်မှုသက်သာအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ? သင်သည် ရှုးဖိနပ်စီးသူ၊ ခြေဆီထွက်တတ်သူဆိုလျှင် စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ရှုးဖိနပ်၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေမှာ အနံ့ဆိုးမထွက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ?
ရှုးဖိနပ်၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေမှာ အနံ့ဆိုးထွက်နေလျှင် သေချာဆေးကြောပြီး နေရောင်ရသောနေရာတွင် ခြောက်သွေ့အောင် နေလှန်းပါ။ စိုထိုင်းနေသော ဖိနပ်ကိုအသုံးပြုလျှင် အနံ့ဆိုးပိုထွက်စေပြီး ဘတ်တီးရီးယား နှင့် မှိုပေါက်ဖွားမှုကြောင့် ခြေသည်းဝဲစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဖိနပ်များကို မဆေးကြောဖြစ်လျှင်လည်း ဆော်ဒါမှုန့် နှင့် ပေါင်ဒါမှုန့်ကို ဖိနပ်အတွင်းဖြူးပေးပြီး တစ်ညထားလိုက်ပါ။ မနက်စီးသည့်အခါ ထိုအမှုန့်များကို ခါချလိုက်ပါ။ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကို မဆေးကြောခင် ထိန်းသိမ်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရှုးဖိနပ်၊ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို အနံ့ပျောက်အောင် ဖြန်းသည့်ဆေးများကိုလည်း ဖြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဖြန်းပြီး တစ်ညတော့ ထားပေးသင့်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကိုလည်း အနံ့သက်သာအောင် သုတ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောက အနံ့ဆိုးတွေကို စုပ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
တင်းကြပ်တဲ့သားရေရှုးဖိနပ်တွေက ပိုပြီးအနံ့ဆိုးထွက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ဖိနပ်တွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
ခြေအိတ်များကို နေပူမှာအရင်လှန်းပြီးမှ ဆပ်ပြာခဲနှင့်အတွင်းအပြင်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး သေချာလျှော်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာခဲနှင့်လျှော်ခြင်းက အနံ့ဆိုးထွက်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ ချည်၊ သိုးမွေးတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခြေအိတ်တို့ကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
သင့်ခြေထောက်မှ ခြေဆီထွက်မှုသက်သာအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ?
ခြေထောက်ကို အဝတ်စ၊ ချေးတွန်းကျောက်များဖြင့် ပွတ်တိုက်ချေးချွတ်ပေးပါ။ ခြေချောင်းကြားနှင့် ခြေသည်းခွံဘေးကြားတွေကိုလည်း တိုက်ချွတ်ပေးပါ။ ဆဲလ်အသေတွေကြောင့် သင့်ခြေထောက်အနံ့ဆိုးထွက်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားများလည်း ပေါက်ဖွားနိုင်သောကြောင့် ပိုးမွှားသေစေတဲ့ ဆပ်ပြာ (Antibacterial soap) ကို အသုံးပြုပေးပါ။ ခြေဖဝါးတွေကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် အမြဲထားပါ။
အချိန်ရသည့်အခါများတွင် ခြေထောက်ကိုရေနွေးစိမ်ခြင်း၊ သံလွင်ဆီစသည့်ကို လိမ်းပြီးနှိပ်နှယ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သော ခြေဖဝါးကို ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေး လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ ချွေးထွက်ခြင်းကို ထိန်းပေးသောကြောင့် ခြေဆီထွက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ထို့အပြင် ပေါင်ဒါမှုန့် ဖြူးပေးခြင်းဖြင့်လည်း အနံ့ဆိုးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆော်ဒါမှုန့်ကိုတော့ ရေလေးပုံတစ်ပုံဖြင့် ဆော်ဒါမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းဖြင့် ရောမွှောပြီးလိမ်းပေးရပါမယ်။
အထက်ပါအချက်များမှာ ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာစေသော နည်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ တကူးတကအချိန်ပေးပြီးလုပ်ရသည့် အချက်များမပါသောကြောင့် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာစေပါတယ်။ လူကြားသူကြားတွင် ဖိနပ်မှထွက်သော အနံ့ဆိုးများကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိလည်း မလုံမလဲနှင့်ယုံကြည်မှုမဲ့နေသည့် အခိုက်အတန့်တစ်ခု ကြုံဖူးတဲ့သူဆို သိပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချက်လေးတွေကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပြီး အကျိုးထူးမယ်ဆိုလျှင် သင်လည်းယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာပါမယ်။ အခြားသူများရဲ့ ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းများလည်း ဝေးကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုသည်လည်း လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် သင့်ရဲ့ပုံရိပ်ကို များစွာပံ့ပိုးပေးနေသည့် အရာဖြစ်သောကြောင့် တန်ဖိုးထားရသည့်အရာထဲက တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အလေးထားစေချင်ပါတယ်။